IiVenkile ezimbini zeApple eSan Diego ziphangiwe ngaphantsi kweyure | Ndisuka mac
IiVenkile zeApple kwihlabathi liphela zihlala zijolise kubusela. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikwazise ngobusela obabenziwe yiVenkile yeApple eCarlifonia, kaCorte Madera, apho amasela athabathe ngaphezulu kwama-24.000 eerandi kwi-iPhone, kwi-iPad nakwi-Mac.Kodwa kubonakala ngathi Ayisiyiyo kuphela ivenkile efumene utyelelo lwabahlobo babanye abantu. Ngokweendaba ezili-10, iiVenkile ezimbini zeApple eSan Diego ziye zaphangwa kwisithuba esingaphantsi kweyure. Ngokwamapolisa, bathathu abantu abaye baphanga kwezi venkile zozibini.
Ngokwezinye iingxelo, isixa semveliso ebiweyo singafikelela kwi-10.000, 20.000 yeedola, kodwa olunye uqikelelo lubonisa ukuba isixa sobusela singafikelela kwi-XNUMX, XNUMX yeedola, sahlulwe phakathi kwe-iPhone, i-iPad kunye neMac. La masela mathathu ayephethe iimela ngesandla kwaye engaboyikisi abasebenzi nangaliphi na ixesha nakubakhenkethi bevenkile, ayikathathelwa ngqalelo njengokuphanga kuxhotyiwe.
Ngokwamapolisa, kungene amadoda amathathu evenkileni, ebe izinto ezininzi ezingaziwayo kwaye abalekele kwimoto elindileyo: isilivere, umnyango oneminyango emi-4. Amapolisa athi abarhanelwa babaleke nenani elikhulu leePhones neeMacs.
Abarhanelwa, ababebonakala ngathi bakwiminyaka engamashumi amabini, bexhobe ngeemela, kwaye amapolisa athi awaboyikisi abathengi okanye agcine abasebenzi. Izixhobo zibiwe kwiitafile ezisevenkileni.
Kwimeko yee-iPhones ezibiweyo kwimiboniso yevenkile, amasela anokuzithengisa izixhobo kwiindawo ezithile, njenge nje ukuba bazishiye ezivenkileni bakhubazeke ngokupheleleyo kwaye akukho msebenzi unokwenziwa ngazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IiVenkile ezimbini zeApple eSan Diego ziphangiwe ngaphantsi kweyure
Ividiyo yokugqibela yeApple Park ibonisa imeko yemisebenzi